प्रतिभा रानी डन के गर्दै छिन् - Samadarshi Sanchar
प्रतिभा रानी डन के गर्दै छिन्
समदर्शी संचार, बिहिबार, १७ भदौ, २०७८, दिउँसोको १२:५४ बजे
सन् २०१९ मा मिस टिनको उपाधी जितेकी प्रतिमा रानी राई पछिल्लो समय टिकटकमा चर्चित बनिन् । टिकटकको लोकप्रियता पछि केहि संचार माध्यममा उनको अन्तवार्ता छायो ।
चर्चित बन्नलाई छोटा लुगा लगाउँनै पर्छ, ग्लामरस लुक्स दिनै पर्छ भन्ने मान्यता उनले तोडिन भन्दा हुन्छ । सोलुखुम्बुमा जन्मे हुर्केकी उनी हाल काठमाण्डौमा बस्छीन् । गहुँगोरो बर्ण, लाम्चो बाटुलो अनुहार, ठुला चिम्सा आँखा र मुसुक्क हास्दा डिम्पल पर्ने आँखा उनको मुख्य आकर्षणको केन्द्र विन्दु हो । त्यो भन्दा उनले टिकटकमा प्रयोग गर्ने छोटा चोटिला शब्दबाडले हुरुक्कै बनाउँछ । हो त्यहि कुराको फ्यान फलोवर्स छन् उनका । उनको डाइलकमा टिकटक बनाउँने ड्वोइट गर्नेको संख्या कम छैन ।
प्रतिभारानीराईडन टिकटक एकाउन्टमा उनले मात्रै १ सय ५५ फलो दिएकी छिन । ४ लाख ४८ हजार ७ सय जना उनको फलोवर्स छन् । ३१.९ मिलियनले उनका भिडियोमा लाईक गरेका छन् ।
‘म नी आफैलाई विर्षन सक्छु तर हरेक पाइलामा साथ दिने तिमीलाई कहिले विर्षन सक्दिन । मेरो जुत्ता एएए..’ यो उनले एकदिन अघि पोष्ट गरेको टिकटक हो । जसलाई लाखौले हेरेका छन् । हजारौले लाईक गरेका छन् । उनको मन छुने विषय यहि हो । दर्शकको मनमा खुल्दुली मच्चाउँने र फुस्स बनाईदिने ।
प्रतिभा टिकटकमा त अब्बल छिन् । उनको अर्को क्षमता पनि उनको – र्याप हान्ने । ‘उठ्दै छु । हिड्दै छु । जिन्दगीको पथमा’ र्याप गाएकी छिन् ।
‘कसम यस्तो हान्न मन लाग्छ नी.. मेरो माया नदेख्दा ।’
‘ अरे यार आफ्नो मान्छेसंग त होनी रिसाउने फकाउने, अन्जानले त धक्कै दिए पनि सरी बाहेक केही निस्किदैन ।’
‘ओई.. चिनीले मुख धुन्छौ कि के हो? के मिठो मुस्कान हौ ।’
‘लुगा होर च्यातियो भन्दैमा सिलाएर फेरि लाउनलाई, विश्वास हो, एकचोटी च्यातिएपछि मेरो अगाडि फेरी हास्दै नआउँनु, चिन्दिन नी म फेरि ।’ यस्ताखाले छोटा मनछुने लाईनहरुको एउटा नमुना संग्रह नै भन्दा हुन्छ – उनको टिकटक एकाउन्ट ।
नामै प्रतिभा हो । उनका प्रतिभाका पाटाहरु धेरै छन् । केहि म्यूजिक भिडियोमा मोडलिङ गर्न पनि भ्याई सकेकी छिन् उनले । गायन र नृत्यमा पनि उनको दख्खल राख्छिन् ।
भरखरै १९ वर्ष लागेकी, उनको हाईट ५.३ छ । हेर्दा सादा जीवन विताई रहेकी रानी डनको एटिच्युट डन जस्तै लाग्छ । उनको एक बोल्ड अवतार हेर्दा जति देखिन्छ । मनको पनि बोल्ड छिन् । आफ्नो श्रीमान कस्तो होस? भन्ने प्रसङ्गमा उनले भनिन् । काधमा काध मिलाएर अघि बड्ने हो कोहि पनि कसैको पन्जा भित्र बस्नु नपरोस् ।